Ego tarifu mbupụ Russia ga-abawanye oge 2.5 - China Foshan Hermes Steel
Tarifu mbupụ Russia ga-abawanye ugboro 2.5
Russia amụbawo tarifu tarifu na scrap ígwè ugboro 2.5. Usoro ego ga-amalite site na njedebe nke ọnwa Jenụwarị maka ọnwa 6. Agbanyeghị, na-atụle ọnụahịa akụrụngwa ugbu a, mmụba nke ọnụahịa agaghị eduga nkwụsị kpamkpam nke mbupụ, mana ka ọ dị ukwuu, ga-eduga na nbelata uru ahịa mbupụ. Ọnụ ego tarifu kachasị dị ọnụ ala bụ euro 45 / tọn kama nke ugbu a 5% (ihe dịka euro 18 / tọn dabere na ọnụahịa ahịa ụwa ugbu a).
Dị ka akụkọ mgbasa ozi si kwuo, mmụba nke tarifu ga-eme ka mbelata ahịa nke ndị na-ebupụ ebubata ahịa, ebe ọnụahịa ndị na-ebupụ ahịa ga-abawanye site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge 1.5. N'otu oge ahụ, n'ihi ọkwa dị elu nke mba ụwa, a na-atụ anya na ego iberibe nchara e zigara n'ahịa ndị mba ọzọ agaghị ada ngwa ngwa mgbe iwu ọhụrụ ahụ malitere ịdị (opekata mpe na February). “Nsogbu nke nnyefe ihe onwunwe dị oke njọ na ahịa nchara ígwè. Turkey nwere ike ịnwe ụkọ akụrụngwa na February. Agbanyeghị, echere m na mmejuputa tarifu a, ọkachasị n'ihe gbasara ụkọ ihe, agaghị ewepu Russia kpamkpam dị ka onye na-ebu ngwaahịa. E wezụga. Nke a ga - eme ka azụmahịa Turkish sie ike, ”onye ahịa Turkey kwuru n’ajụjụ ọnụ ndị mgbasa ozi.
N'otu oge ahụ, ebe ọ bụ na ndị na-ere ahịa mbupụ enweghị obi abụọ banyere mmejuputa ụtụ isi ọhụrụ, ka ọ na-erule ngwụsị afọ, ọnụahịa nzụta ọdụ ụgbọ mmiri ga-edozi na 25,000-26,300 rubles / ton (338-356 US dollars / ton) CPT ọdụ ụgbọ mmiri, nke ga-enyere ahịa uru. , Ma bawanye tarifu.